प्रभु बैंकको ४०% हकप्रद भर्न ५ दिन मात्र बाकी, कहाँ जाने सेयर भर्न ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » प्रभु बैंकको ४०% हकप्रद भर्न ५ दिन मात्र बाकी, कहाँ जाने सेयर भर्न ?
काठमाडौं - प्रभु बैंकको ४०% हकप्रद भर्न अब ५ कार्यदिन मात्र बाँकी रहेको छ । यो हकप्रदमा आइतबारसम्म मात्र आवेदन दिन सकिनेछ । बैंकले माघ ७ गतेदेखि १०ः४ अनुपातमा १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यको २ करोड ३५ लाख २५ हजार ६०८ कित्ता सेयर बिक्री खुला गरेको हो ।
बिक्री प्रबन्धक सनराइज क्यापिटल लिमिटेड, कमलपोखरी काठमाडौं र प्रभु बैंकको प्रधान कार्यालय बबरमहल काठमाडौं तथा यसका अधिकांश शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिनेछ । आस्वामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ ।
राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन बैंक ४०% हकप्रद सेयर निष्कासनमा जुटेको हो । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी रुपैयाँ रहेको छ । ४०% हकप्रदपछि भने चुक्ता पुँजी ८ अर्ब २३ करोड ३९ लाख ६२ हजार ८०० रुपैयाँ पुग्नेछ ।